Exe. Generation: wakhet -स्व-स्फुर्त पुस्ता संस्था वाखेत | Wakhet Diary
Exe. Generation: wakhet -स्व-स्फुर्त पुस्ता संस्था वाखेत
Exe. Generation: wakhet -स्व-स्फुर्त पुस्ता सँस्था र
Exe. Generation: सरो सहकारी
हामी सँगै धेरै हिड्नु छ। ३ बर्ष पहिले सम्म Exe. Generation एउटा कल्पना थियो। ३ बर्ष पछि कन्सेप्ट भएको छ। यस्को सफल सुरुवाट भयो। मलाई उत्साह र डर बराबर लागेको छ । अनि आफै भित्र एउटा आत्मबिश्वास पनि पलाएको छ।
सबै फाईनान्स र सहकारी हरु कमाउ को ब्यबसाय गरि रहेको बेला ” सरो सहकारी” एउटा जागरण हो। हामी दुब्न बाट बचौ। जिबनभरि लगाएर सँगालेको पसिना अरुकै भर मा न सुम्पियौ।
सरो सहकारी लाई धेरैले शुरुमै गलत ब्याख्या पनि गरिदिए। जस्को नियत नै शंकालु छ। उनिहरुले त झन काल्पनिक आँखाले के के देखे के के ? तर यथार्थ सरो सहकारी नियमित मार्षिक बराबर सबै जना सदस्यले मिलेर बराबर पुँजी हुने सरो सहकारी बनाऔ भन्ने थियो। हामी गाउँलेहरुले एकै चोटी लगानी गरेर फाईनान्स, सहकारी या बैक खोल्न सकिदैन। सक्यो भने पनि जस्को पुँजी छ मुनाफा उस्लाई नै हो। बाकी त बचत कर्ता र रिण कर्ता मात्रै हो। तर सरो सहकारी यो कन्सेप्ट यि भन्दा अलग छ। हामी हाम्रो लागी हामी नै गर्न सक्छौ भन्ने आत्मबिश्वास नै सरो सहकारी हो।
सरो सहकारी कुनै कतै बाट कपि गरिएको कन्सेप्ट होईन यो त हाम्रो बाजे बराजु ले शुरु गरेको सरो कै परिमार्जित रुप मात्रै हो। जुन त्यो बेला र अहिले सम्म पनि सँस्कार चलाउन मात्रै प्रयोग मा थियो भने हामी ले परिमार्जन सहित अब सामुहिक आर्थिक सुधार को लागी प्रयोग मा ल्याउने प्रयोग गरेको मात्र हो ।जसरी सरो ले हामीलाई दाजुभाई ( पुन-पुन, पाईजा- पाईजा, राम्जाली- राम्जाली ईत्यादी थर) मा सँगठित गरेर राखेको छ। सरो सहकारी ले पनि पुरै हाम्रो गाउँलाई सँगठित गरेर राख्ने छ भन्ने बिश्वास सहित यो सरो सहकारी कन्सेप्ट आएको छ।
छरिएर रहेको पुँजीलाई एक ठाउँ मा बराबर जम्मा पारेर उत्पादन मुलक ठाउँ मा लगानी गरी सुन्दर समाज र सुरछित भबिस्य र आर्थिक आत्मनिर्भरता को बाटो मा यो सँस्था हिड्दैछ। यो दोस्रो पाईला सरेको छ। यस्ले कोषौ को दुरी हिड्नु छ। २ महिना मा २लाख ३४ हजार सँकलन मजाक होईन। मात्रै हाम्रो एकता यसरी नै रहि रह्यो भने ५ बर्ष मा हामीले गर्व गर्ने सक्ने छौ। हाम्रो पनि सरो सहकारी छ। जस्को पुजी १ करोड भन्दा माथी छ।
हाम्रो लछ्य पुँजी जम्मा गर्नु मात्रै होईन। हामी पुग्न नसकेको बजार मा पुग्नु पनि हो। एक्लैले हामीले कहिल्यै पनि हाम्रो उत्पादन बजार सम्म पुराउन सकेनौ। अव ११७ जना ले गरेको उत्पादन १ ठाउँमा जम्मा पारेर बजार खोज्यौ भने कालीमाटी को तरकारी बोक्ने ट्रक हाम्रो आँगन मै आउछ। वाखेत मा २०-२५ दोको आलु सबै को मा हुन्छ तर त्यो आलु कोशेली पठाएर, उसिनेर खाएर, मुसाले काटेर सकिन्छ। बिक्यो नै भने पनि आज ४ पाथी बिक्छ। भोली ३ पाथी पैसा छरिएर आउछ र काम नलागी सकिन्छ। तर एक मुस्टै आलु बेल्न पाउने हो बने हामीले बचत गर्न सक्ने थियौ।
यस्तै ब्याक्तिबादी सोच र परम्परा भित्रको समस्या समधानको लागी नै Exe.Generation (स्व-स्फुर्त पुस्ता) भन्ने सँस्था को जन्म भएको हो। स्व-स्फुर्त पुस्ता को असर अहिले नै देखिन थालेको छ। यो साल हाम्रो गाउँ रागो- पाडा पाडी मा आत्म निर्भर भयो। हरेलो बाहेकको अरु पर्ब मा बाहिर बाट रागो, पाडा कतै पनि किनिएन। उल्टै हाम्रो गाउँ मा ६ बटा रागो हरु अझै स्टोक मा छ। आत्म निर्भरको सजिलो बाटो यहि नै हो। यसै गरी २ बर्ष भित्र बेसार मा र तेस्रो बर्ष भित्र दाल मा आत्म निर्भरको बाटो मा छ। हाम्रो सँस्था र हाम्रो गाउँ ।
मात्रै हामी मा चाहिएको छ सँगै हिड्ने बानी को बिकास। धर्य, एकता , आत्मबिश्वास, र बिश्वास जस्ले हामीलाई जिवन सहजताको बाटो मा लैजान्छ। हामीले हाम्रै सरो सहकारी लाई १० बर्ष टिकायौ भने हामीले हरुको भर मा दुखेसो पोखेर जुनि कात्नु पर्ने छैन।
गाह्रो थियो सुरुवाट तिर को अभियान
महिना पछि १००० कहा जम्मा गर्न सकिन्छ सबै को यहि प्रतिप्रश्न थियो। तर हामीले उपाय हरु यसरी हामी भित्र नै देखायो। बियर पिउने बानी छ भने मात्रै महिना मा ४ बटा बियर कम पिउनुहोस। मुबाईल चलाउनु हुन्छ भने परिवार को सबै जनाले २ सय को दर ले मुबाईल खर्चमा कम गर्नुहोस। ज्यालामा काम गर्नु हुन्छ भने मात्रै ४ दिन अरुको काम गर्नुहोस। हप्तामा २ मासु खानु हुन्छ भने १ दिन मात्रै मासु खानुस। तरकारी उब्जाउनु भएको छ भने हप्तामा १ ठाउँमा जम्मा गरेर बजार खोज्नुहोस।
२५ वटा लेयर कुखुरा पाले मात्रै पनि बर्ष को १२ हजार बचत गर्न सक्नु हुन्छ। ३ वटा बोका पाले मात्रै पनि सजिलै १२ हजार बचत गर्न सक्नु हुन्छ। शुरुमा पत्याउन गाह्रो भयो बिस्तारै यो खबर तातेको फलाम जस्तै एउटा कणले अर्को कणलाई तताउन थाल्यो र पुरै गाउँ तात्यो। सरो सहकारी को कन्सेप्ट को सफल सुरुवाट भयो। १६५ घर धुरी सरो (घर कुरिया) भएको गाउँ मा ११७ जनाले महिना को १ हजार बचाउन सक्छौ भन्ने आत्मबिश्वास पलाउनु नै Exe. Generation -स्व-स्फुर्त पुस्ता हो। यस्तै सँस्था हरेक गाउले ले आफै स्वस्फुर्त रुपमा सुरु गर्नु पर्छ र आफ्नो खुट्टा मा आफै उभिनु पर्छ। ११७ जना मेम्बर ले ११७ पाठी बेसार उत्पादन गरे भने त्यो बेसार हाम्रो गाउँलाई पुग्ने बेसार हो। २ पाठी को दर ले उत्पादन गरे भने त्यो अर्को गाउँ लाई पुग्ने बेसार हो। हामी ठुलो सपना न देखौ मात्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र को बिकास हामी भित्रै बाट सुरुवाट गरौ। सरकार र राजनितिको भर परेर बस्ने हो भने हामी भोका को भोकै गरिब को गरिब, कामदार को कामदार नै रहने छौ। कामदार पनि आत्मनिर्रभर नालिक बन्न सक्छन भन्ने आत्मबिश्वास हामी भित्र जगाउनु नै Exe. Generation- स्व-स्फुर्त पुस्ता सँस्था को स्थापना को उद्देश्य हो। धेरैले यो सँस्थालाई एनजिओ को कार्यक्रम भन्ने पनि सोचे। जस्ले जे सोचे पनि सोच्नु लाई छुट छ। मात्रै ति सदस्यहरु जस्ले हामी हाम्रो लागी आफै गर्नु सक्छौ भनेर अगाडी आउनु भएको छ उनिहरुले आफैले आफैलाई बुझिदिए पुग्छ। आफै आफै माथी ईमान्दार भए पुग्छ।
त्यो दिन टाढा छैन। जुन दिन हाम्रो आफ्नै ब्राण्ड हुने छ। ब्याण्ड हुने छ र सरोसहकारी बैक हुने छ। जस्को पुँजी पनि पुरै गाउँलेको बराबर हुने छ र मुनाफा पनि बराबर नै हुने छ। हामी अरुको रिण बाट मुक्त हुने छौ र हामीलाई आबस्यक परेको बेला मा हाम्रै सरो सहकारी बाट लगानी पाउने छौ।
कृर्षि गुजारा मुखि छ निर्बाह मुखि छ। कृर्षि उत्पादन मुखि र ब्यबसाय मुखि हुदा बित्ती कै हाम्रो आर्थिक स्तर अरव मा काम गरेर परिवार चलाउनु पर्ने बाध्यता भित्र हो हुने छैन। त्यसको लागी जागरुक पुस्ता आबस्यक छ। ब्यसाय को लागी पुँजी आबस्यक छ। त्यहि जागरुक पुस्ता को निर्माण को लागी त्यही पुँजी सँकलन को लागी Exe. Generation सँस्था कन्सेप्ट वाखेत मा आएको छ। यो सँस्था ले आफ्नो शाखा अरु गाउँ मा लैजादैन। मात्रै त्यस्तै जागरुक पुस्ता त्यही गाउँ मा निस्किउन भन्ने जागरण चाहि फैलाउछ र उनिहरुकै सरोसहकारी उनिहरुकै लागी बनोस भन्ने चाहाना चाहि राख्छ। किन कि Exe. Generation व्यबसाय को लागि भन्दा पनि जागरण को लागी आएको सँस्था हो। आउने ५ बर्ष भित्र यो सरो सहकारी उदाहरण भएको सुन्न मिल्ने गरी सरो सहकारी का मेम्बरहरु मिलेर काम गर्नुस। यो नाफा मुखी र स्वार्थको लागी भएको भए पैसा हुने हरुको समुह ले सहकारी खोल्ने थियो। तर यो स्वार्थ मुखि भन्दा पनि सबै सगै सगै उठौ। हाम्रो आस्यकता र समस्या को सामधान सँगै खोजौ बनेर यो सँस्था आएको छ।
धन्यबाद जस्ले मन को एउटा कुना ले भए पनि यो कन्सेप्टलाई पत्ताई दिनु भयो र २ दोस्रो पाईला सम्म साथ दिनु भयो हामीलाई यस्तै ६० पाईला सँगै हिडेर आफुले आफैलाई बिस्वास गर्ने साथी चाहिएको छ।
This entry was posted in 6.Exe. Generation: Wakhet by Wakhet Diary. Bookmark the permalink.